Sheikh Sabah oo mar kale loo magacaabay Ra’iisul wasaaraha Kuwait | Banaadir Times
HomeUncategorisedSheikh Sabah oo mar kale loo magacaabay Ra’iisul wasaaraha Kuwait
Amiirka Kuwait Sheikh Nawaf al-Ahmad al-Sabah ayaa dib ugu magacaabay Sheikh Sabah al-Khalid al-Sabah raiisul wasaare kadib doorashadii baarlamaanka ee ka dhacday dalkaasi, oo wajahaysa dhaqaale xumo tii ugu xumeyd muddo tobanaan sano ah.
Sheikh Nawaf ayaa weydiistay Sheikh Sabah inuu soo magacaabo xubnaha golaha wasiirada cusub si loo ansixiyo, warbaahinta dowlada ayaa sheegtay Talaadadii.
In kasta oo amiirka uu leeyahay go’aanka ugu dambeeya ee arrimaha gobolka, haddana ra’iisul wasaaruhu dhaqan ahaan wuxuu gacan ka geystaa socodsiinta xiriirka inta badan kacsan ee u dhexeeya dowladda iyo Baarlamaanka, halkaas oo musharixiinta mucaaradka ay guulo ka gaareen codeyntii sharci dejinta ee Sabtidii.
Sheikh Sabah, oo ahaa wasiirka arrimaha dibedda tan iyo 2011 ka hor intaan loo magacaabin jagada ra’iisul wasaaraha dhammaadkii 2019, wuxuu wajahayaa howsha deg-degga ah ee looga guuleysanayo jahwareerka sharci dejinta oo u oggolaan doona Kuweyt in ay ka faa’iideysato suuqyada deynta caalamiga ah si ay u joojiso dhaqaalo xumada dalkaasi ka jirto.
Safafka isdaba joogga ah iyo ismariwaaga u dhexeeya golaha wasiirrada iyo boqortooyada gobolka Khaliijka ugu da’da weyn uguna cad cad, ayaa horseeday isku-shaandheyn xukuumadeed oo isdaba-joog ah iyo kala-diristii Baarlamaanka, taasoo caqabad ku noqotay maal-gashigii iyo dib-u-habeyn dhaqaale iyo maaliyadeed ee gobolka ka jirta.
Siyaasadda shidaalka ee soo saaraha OPEC, oo ay dejiyaan Golaha Sare ee Batroolka, iyo siyaasadda arrimaha dibedda, ee uu hoggaamiyo amiirka, uma badna in ay isbeddelaan dowladda cusub.
Previous articleMaxkamadda Sare Puntland oo mudeysay dhageysiga kiiska Xildhibaanadii Xasaanada laga qaaday!
Next articleQaramada Midoobay oo sheegtay in 2020 ay barakaceen in ka badan 80 Milyan